Zaka tsara: izao vao tsaroana ny vahoaka… | NewsMada
Zaka tsara: izao vao tsaroana ny vahoaka…
Mahavariana sy mahavalalanina, amin’ny fotoam-pifidianana toy izao vao tena hita sy tsaroana ny vahoaka. Tsy inona fa maika ny ho voafidy ka atao avokoa izay fomba hahazoana ny fo sy ny vaton’ny mpifidy.
Amin’ny toy izao, ohatra, vao mahatsiaro manadio tanàna ny sasany, na manarina fotodrafitrasa etsy sy eroa, na manao fizaham-pahasalamana sy fitsaboana maimaimpoana… Nahoana izany no tsy natao izay ela izay na mandavantaona?
Tsy ny vahoaka anaovana hetsika loatra tsinona no tena zava-dehibe sy mahamaika fa izay hahazoana ny vatony ihany: rehefa tonga eo amin’ny fitondrana, dia izay. Tsy misy ny vola ihetsehana, raha tsy amin’ny fotoam-pifidianana toy izao?
Tsy inona fa fivarotan-tena sy fivarotan-tanindrazana amin’izay tompon’ny vola, fanomezana tombondahiny azy rehefa tonga eo amin’ny fitondrana ny tena. Koa tena fahatsiarovana sy fitsinjovana vahoaka ve ny fihetsiketsehana be afitsoky ny sasany amin’ny toy izao?